Chaayinaan qoqqoobbii Eertiriyaarra kaa’amu kamiiyyuu kan mormitu ta’uu beeksiifte – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Chaayinaan qoqqoobbii Eertiriyaarra kaa’amu kamiiyyuu kan mormitu ta’uu beeksiifte
On Jan 5, 2022 177
Finfinnee, Muddee 27, 2014 (FBC) – Ministirri Ministeera Dhimma Alaa Chaayinaa Waang Zyiin Preezdaantii Eertiriyaa Isaayyaas Afawarqii waliin dhimmoota waloorratti mari’ataniiru.
Waang zhiin, Chaayinaan qoqqoobbii Eertiriyaarra kaa’amu kamiiyyuu kan mormitu ta’uu ibsaniiru.
Waang Zyiin kaleessa galgala daawwannaa hojiif Eertiriyaa kan galan yoo ta’uu, ergaa Preezdaantii Chaayinaarraa Preezdaant Isaayyaas Afawarqiif ergame geechisaniiru.
Xaalayaan ergame Preezdaant Isaayyaas gara Beejingi imaluun dhimmoota waloo biyyoota lamaanirratti akka mari’atan kan gaafatu ta’uu Ministeerri Beeksiisaa biyyattii Yemaanee Gabramasqal fuula Tiwiitarii isaaniin ibsaniiru.
Waang Zyii fi Preezdaant Isaayyaas misooma Buufata Mutsuwwaa, Asab, ijaarsa dandeettii humna namaa, bu’uuraalee misoomaa fi damee Albuudarratti tumsaan hojjechuuf marii gaggeessaniin waliigaluu isaanii Yemaane Gabramasqal ibsaniiru.
Chaayinaan Yeenii miiliyoona dhibba 1 Eertiriyaaf deeggarsa taasiisuus himaniiru.
Baankiin Misooma Afrikaa hanqina midhaan nyaataa ittisuuf kan oolu Doolaara…
Raashiyaan magaalaa Yukreen Maaripool jedhamtu guutummaatti to’atte
Biyyoonni miseensa Biriiksi(BRICS) yaadota walitti bu’iinsa kakaasan irraa of…
Baankiin Misooma Afrikaa hanqina midhaan nyaataa ittisuuf…
Raashiyaan magaalaa Yukreen Maaripool jedhamtu guutummaatti…
Biyyoonni miseensa Biriiksi(BRICS) yaadota walitti bu’iinsa…